China EDTA chelated TE factory sy mpamatsy | Lemandou
Ny elanelan'ny mikroba Chelated dia namboarina niaraka tamin'ny fitaovana EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn tamin'ny alàlan'ny fanandramana fanasitranana, chelating, fifantohana, etona, granulate. Aorian'ny fitsangatsanganana miaraka amin'i EDTA, dia misy amin'ny vokatra malalaka ny vokatra. Amin'ny maha zezika azy, dia manana ny fitrandrahana haingana, mora entin'ny vokatra, fatra ambany nefa mahomby, tsy misy residu. Amin'ny maha fitaovana azy ireo, amin'ny famolavolana zezika NPK zezika zezika hafa, dia misy tombony amin'ny fangaro mora, tsy fanoherana, ary fanodinana mora. Ny asa lehibe indrindra amin'ny zezika bitika bitika dia ny manitsy ny tsy fahampiana, izay singa hafa tsy afaka manolo. Ny vokatray dia afaka mampitombo ny fahombiazany rehefa mampiasa azy miaraka amina zezika NPK be dia be.
PH (vahaolana 1% amin'ny rano)
Raharaha tsy voavaha rano
Vovoka kristaly manga
Vovoka mavokely maivana
EDTA-Fe:Nampiasaina ho toy ny mpitsabo decolorizing amin'ny haitao sary. Izy io dia ampiasaina ho toy ny additive amin'ny indostrian'ny sakafo, ho toy ny singa fototra amin'ny fambolena, ary ho mpiorina amin'ny indostria. EDTA-Fe dia chelate metaly tsy voavahan-drano miorina amin'ny rano, izay misy ny vy ao anaty fanjakana chelated.
EDTA-Zn: Amin'ny maha-singa mahavelona singa azy, ampiasaina amin'ny fambolena.
EDTA-Cu: Amin'ny maha-singa mahavelona singa azy, ampiasaina amin'ny fambolena.
EDTA-Ca:Izy io dia azo ampiasaina ho mpizara misaraka. Izy io dia chelate vy tsy mety ritra amin'ny rano izay afaka mitsoka ny ion-by vy. Fifanakalozana kalsioma amin'ny vy hananganana chelate azo antoka kokoa. Amin'ny maha-singa mahavelona azy dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo, ny fambolena ary ny fiompiana.
EDTA-Mg: ho toy ny singa mahavelona, ​​ampiasaina amin'ny fambolena.
EDTA-Mn: Amin'ny maha-singa mahavelona singa azy, ampiasaina amin'ny fambolena. Amin'ny fambolena fambolena dia ampiasaina ho singa ilaina amin'ny fambolena ravina amin'ny zezika amin'ny tany, ary ampiasaina koa ho toy ny singa ilaina amin'ny hydroponics.
EDTA-Fe: Notehirizina tamina toerana mangatsiaka sy maina, dia hanafoanana ny vokatra ilay hazavana.
EDTA-Zn: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary tsy maintsy hamafisina aorian'ny fisokafana.
EDTA-Cu: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary tsy maintsy hamafisina aorian'ny fisokafana.
EDTA-Ca: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina (<30 ℃). Tsy maintsy averina andrana aorian'ny fampiasana azy 3 taona.
EDTA-Mg: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary tsy maintsy hamafisina aorian'ny fisokafana.
EDTA-Mn: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina. Ny jiro dia hampiatoana ny vokatra.
Previous: Kitapo ahidrano